Imibuzo Ebuzwa Njalo mayelana ne-Spellcasting namasiko omlingo - World of Amulets
Umphakathi omusha wokusekelwa ku-World of Amulets
Ungazisebenzisa kanjani izingilazi ezinkulu / i-Olimpiki / Imimoya ye-Olimpiki / Ukuhlanzwa kwe-Reiki nokushaja Pad
Ungayisebenzisa kanjani i-Demon Cleansing kanye neCash Pad
World of Amulets izindlela ezintsha zokukhokha
Ikhaya / Izindaba / Imibuzo Ebuzwa Njalo mayelana ne-Spellcasting namasiko omlingo
Imibuzo Ebuzwa Njalo mayelana neSpellcasting kanye nemicikilisho yemilingo
Abantu bavame ukuzibuza ukuthi sikwenza kanjani ukupela kwethu kanye nemicikilisho yomlingo futhi basithumelele ama-imeyili ngalokhu. Ngakho-ke sizothatha imibuzo ejwayelekile kakhulu siyiphendule lapha. Bheka lokhu ngezikhathi ezithile ukuze ubone izimpendulo zakamuva noma uthumele okwakho esigabeni sokuphawula.
Yini oyisebenzisayo izithomba?
Zonke iziphandla zethu zenziwe nge-Stainless Steel noma iSterling Silver. Le nsimbi iyona engcono kakhulu yamandla okubopha kuyo. Ezinye iziphandla zinikezwa kuphela ngo- isiliva esivelele ngoba ingcono kakhulu yamandla ashumekiwe. Konke izindandatho ngokwesibonelo zinikezwa kuphela ngesiliva elihle kakhulu.
Ingabe inguqulo yensimbi nesiliva inamandla nokusebenza okufanayo?
Yebo bobabili bayafana. Isizathu sezinguqulo ezi-2 ukuthi abanye abantu banokungezwani komzimba nezinto zensimbi ukuze bakwazi ukukhetha eyesiliva. Izintelezi zesiliva zinobubanzi obufanayo (35mm) kepha zincane futhi ngenxa yalokho zikhanya kancane.
Ngabe kufanele ngigqoke i-amulet ngaphakathi noma ngaphandle kwezingubo zami?
Indlela engcono ukugqoka isiphandla esithinta isikhumba sakho. Ngaleyo ndlela izosebenzisana namandla akho ngendlela ephumelela ngokwengeziwe.
Ngabe izilwane (ezifuywayo) zingathinta iziphonso?
Yebo, lokho ngeke kuphazamise amandla ayo
Ngabe ngidinga ukukhokhisa i-amulet?
Zonke iziphandla zikhokhiswa lapho zithunyelwa. Ngemuva kwesikhashana, kuya ngobungako bokusetshenziswa kwayo, ungahle udinge ukubakhokhisa futhi (ukushaja akufani nokwenza kusebenze, ukwenza kusebenze kanye nokushaja kokuqala kwenziwa yithi) Ukuze ukhokhise i-amulet ungayibeka ngaphandle ngesikhathi esigcwele inyanga isikhathi eside ngangokunokwenzeka (okungenani amahora ama-4) noma ungasebenzisa iphedi yokushaja efana ne- ingelosi eyinhloko pad or pad wedimoni
Ngingazisebenzisa yini iziphandla noma amasongo akho kanye nezinye izinto ezifanayo ezivela kwabanye abathengisi?
Asikukhuthazi lokhu ukwamukela esimweni lapho wazi khona ngokuqinisekile ukuthi okunye iziphandla noma izindandatho azisebenzi. Kuleso simo ungazigqoka ndawonye ngaphandle kwenkinga. Ungaba nenhlanhla futhi intelezi yethu isebenzise enye. Lokhu kungenzeka uma zombili zingumoya ofanayo, isibonelo intelezi yethu yelucifer futhi sigil amulet ka-lucifer komunye umthengisi. Lokhu kwenzeka kwesinye isikhathi kepha asikwazi ukukuqinisekisa lokhu.
Ingabe idemoni iziphonso ziyalimaza?
Cha, ngoba sisebenzisa umklamo othile wokuvikela ongeke uvumele amandla aphume ngaphandle kokulawulwa. Zonke amademoni ethu nezinye iziphawu ziphephile ngokuphelele ukugqoka.
Ngingageza noma ngibhukude nge-amulet
Yebo uyakwazi, ngeke kuphazamise amandla alo
Kuthatha isikhathi esingakanani ukwakha i-amulet?
Ukwakha i-amulet entsha kungathatha iminyaka kodwa uma sesine-amulet ebilokhu ihlolwa futhi itholakala isebenza kahle sisadinga cishe izinsuku ze-10 ukuyilungiselela iklayenti. Isinyathelo sokuqala ukuyidala ngokomzimba, emva kwalokho kudingeka siyihlanze kuwo wonke amandla futhi emva kwalokho i-amulet kufanele inikezelwe kumniniyo. Isiko lokunikezela lincike ohlotsheni lwamandla, isicelo sabanikazi kanye nosuku nesikhathi esifanele namandla asemandleni onke ukuze bakwazi ukuboshelwa ku-amulet nomniniyo.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-amulet yenze umsebenzi wayo?
Uma usuthole i-amulet, yinike isikhathi esithile, kuze kube amasonto ambalwa ukuze ulungise futhi udale i-symbiosis ngamandla akho, imvamisa kuthatha izinsuku ezingama-28.
Yini okufanele uyenze uma ngingaboni zinguquko ngemuva kwezinsuku ezingama-28?
Imimoya inendlela yayo yokwenza izinto. Kuthuthuke kakhulu kunathi kepha kunezinto ezimbalwa ezingabambezela inqubo.
1) Uzama ukubaphusha ukuthi basebenze ngokushesha. Leyo yinombolo enkulu. Imimoya ayikwazi ukusunduzwa, uku-oda nxazonke noma ukuphathwa kabi. Bayekeni benze izinto zabo futhi bazonakekela.
2) Awuzange wenze isenzo. Imimoya ilungisa izimo kepha udinga ukuthatha isenzo. Njengoba zingenayo ifomu lomzimba, azikwazi ukuhlanganyela ezintweni ezibonakalayo. Ake ngikunikeze isibonelo: Imimoya ifana nomlimi olungisa umhlabathi wokutshala imifino, aze abeke imbewu ayikhulise. Kepha kuzofanele unakekele izitshalo. Uma ungaziqoqi ngesikhathi, zizochitha.
3) Awunanhlonipho noma awukhombisi ukubonga emimoyeni. Bazoyeka ukukusebenzela futhi ayikho indlela yokubenza bashintshe umbono wabo kamuva.
4) Awukho ngokoqobo ezicelweni zakho ezikhuluma nemimoya.
Imimoya ingenza okuningi kepha ayikwazi ukukundiza, ubone izinto, ube namandla ama-persones angama-20, njll ... ngiyaqiniseka ukuthi uthola iphuzu lami lapha.
Ngabe imimoya ingenza ngicebe ngidume?
Yebo bangakwazi, uma ukhetha imimoya efanele futhi wenze izicelo ezifanele. Inkinga nge imali leyo yimimoya angazi ukuthi iyini imali ngoba isho izinto eziningi ezahlukene kubantu abaningi. Nayi i-athikili ephelele mayelana kungani iziphonso zemali zisebenza kuphela kwabahlakaniphileyo
Ngingabavumela yini abanye abantu ukuthi bathinte amulet wami?
Akekho ongayithinta ngezandla zabo, lokhu kubaluleke kakhulu ngoba amandla abanye abantu angadluliselwa kwi-amulet yakho. Uma lokhu kwenzeka kungaba ukuhlakanipha ukuba nephedi yokuhlanza / yokushaja eseduze. Uma ungenayo, sazise futhi sizoyihlanza ukude.
Uma kwenzeka kukhala iringi, konke lokhu okungenhla kuyasebenza ngaphandle kwe- okwabanye abantu ethinta indandatho. Lokhu akuyona inkinga futhi ngeke kuthinte amandla ashumeke kuyo.
Uma kwenzeka othile ethinta isiphandla sakho ngezandla, ngiyacela xhumana nathi ukuthola ukulungiswa kabusha.
Ngisebenza kanjani futhi nginakekela i-amulet yami?
Nayi i-athikili ephelele ngale ndaba:
Ungayisebenzisa Kanjani i-Amulet noma iRing Yakho?
Ngabe ngidinga ukudela imimoya?
Cha, imihlatshelo yokwenza kusebenze yenziwa yithi. Futhi ngicela ungalinge unikele ngegazi kumoya. Abayithandi futhi bazoyeka ukukusebenzela. Uma ufuna ukunikela ngokuthile njengophawu lokubonga ngesikhalazo abakutholile, sebenzisa imizwa enjengothando noma ukubonga. Amanzi amasha, iwayini, amaswidi, izitshalo, impepho, njll ... angasetshenziswa futhi.
Ingabe iziphandla ziyangiphazamisa enkolweni yami?
Cha, bebengenakukhathalela okuncane uma ungumKristu, umBuddha, umPagane, umSulumane, njll.
Ngabe kukhona okungahambi kahle ekusebenziseni i-amulet?
Cha, zonke iziphandla zethu ziphephe ngokuphelele ukuzisebenzisa. Kwezinye izimo noma kunjalo bangaheha eminye imimoya ngenxa yamandla abenawo. Lokhu akuvamile kakhulu kepha kungenzeka. Le mimoya ehehwa ngamandla e-amulet ayinakulimaza kepha ingakwenza uzizwe ungakhululekile
Kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza isipelingi?
Lokhu kuncike kakhulu kuhlobo lwamandla okuzosetshenziswa. Ezinye iziphonso zidinga kuphela imizuzu ye-30 ngenkathi ezinye iziphonso zingathatha amahora we-2 noma ngaphezulu.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola i- ukupela ukuze ube namandla aphelele?
Izipelingi zidinga isikhathi sazo sokushintsha amandla, izimo nezinhloso. Isipelingi esivamile sidinga izinsuku ze-28, umjikelezo ophelele wenyanga ukuze ufike kumandla agcwele. Ezinye izikhala ezikhethekile, eziyinkimbinkimbi zingathatha imijikelezo yenyanga ye-3.
Ngingawenza yini omunye umsebenzi wamandla ngenkathi ngilinda ukuthi ukupela kwakho kufike amandla aphelele?
Cha, uma wenza umsebenzi wamandla ngesikhathi somjikelezo wenyanga uzoshintsha izimo futhi ukupela ngeke kusasebenza. Yithi kuphela esingenza umsebenzi owengeziwe wamandla uma usuvele uthole ukupela kusuka kithi. Siyazi ukuthi sikwenze kanjani futhi singakwazi ukuhlenga umsebenzi owengeziwe wamandla ku-spell ukuze ungaphazamisi.
Angiziboni izinguquko, kungani lokhu?
Iziphonso ziguqula izimo kepha udinga ukuthatha isinyathelo. Umphumela wesipelingi uncike kulokho okwenzayo ngawo. Ake ngikunikeze isibonelo: Isiphonso sifana nensimu elungisa insimu yekhasimende ezimeni ezifanele ukuze iklayenti likwazi ukutshala elikudingayo. Uma iklayenti lingatshali lutho, akunakwenzeka ukuvuna ngesikhathi esithile. Ezinye iziphonso zingadala ushintsho olungazelelwe emandleni futhi uzokuzwa lokhu kushintshwa. Lokhu kwenzeka ngakho-ke akunakwenzeka ukubala konke lapha. Ake ngikunikeze isibonelo: Ufuna isiphonso sothando siphonswe ukuze uthole uthando lwempilo yakho. Kusuka ku- usuku 3 uqala ukubona umuntu ofanayo njalo usuku. Lesi yisibonakaliso sokuthi indawo isilungile. Manje udinga ukutshala. Ngakho-ke khuluma nalowo muntu futhi uzothola ukuthi isipelingi sisebenzile. Kepha uma ungenzi, uzolahlekelwa yithuba.
Usebenzisa hlobo luni lomlingo?
Kithina akekho omnyama umlingo, umlingo omhlophe, amazulu umlingo noma idemoni umlingo. Sincamela ukubabiza bonke ngokuthi umlingo noma amandla wokukhohlisa noma uku-oda. Yonke into ingamandla, ukubeka amalebula kuyo kuzodala ubumbano obungathandeki obuzoholela ekubahlukaniseni njengokuhle noma okubi. Akunjalo into enhle noma embi umlingo. Amandla awanakubili. Sisebenzisa amandla asebenza kahle kakhulu ecaleni ngalinye. Uma kwenzeka kungakhathalekile ukuthi sizowasebenzisa miphi amandla, sinikeza okulandelayo: Amandla eNgelosi / Ingelosi eyinhloko, amandla e-daemon, Imimoya yama-Olimpiki amandla noma uReiki. Lawa amandla amakhulu esiwasebenzisayo, kodwa futhi siyawasebenzisa imimoya yemvelo amandla, amandla asezulwini namandla eon. Uhlobo esizolusebenzisa luxhomeke ecaleni eliseduze.
Ingabe kukhona ukubuyela emuva lapho ungipela isipelingi?
Cha, sithatha konke ukuqapha futhi senze iziphonso endaweni ephephile ngokuphelele.
Iyiphi intelezi enamandla kunazo zonke esinayo?
Zonke iziphandla zethu ezinamandla, konke kuncike kulokho okudingayo. Uma unezindawo eziningi empilweni yakho lapho udinga ukwenziwa ngcono, ngincoma ukuthi iziphonso ze-abraxas or ring. Lokhu kunamandla amakhulu futhi kusebenza zonke izindawo.
Ingabe uyawenza umklamo wangokwezifiso?
Kwesinye isikhathi siyakwenza kepha ngesikhathi sobhadane lwe-covid-19 ngeke sikwazi ukwamukela umsebenzi wesiko.
Ngingayithengisa imikhiqizo yami kusayithi lakho?
Yebo ungakwenza. Inqobo nje uma imikhiqizo noma izinsizakalo zakho zingokomoya / ama-esoteric ngokwemvelo. Ukufakwa kuhlu kwemikhiqizo yakho kumahhala futhi sikhokhisa kuphela u-4.5% wokuthengisa kwakho. Ungathola eminye imininingwane ngokuba ngumthengisi lapha: Yiba ngumthengisi ku-WOA
Buka i-athikili ephelele →